MinerGate: ဒီ Miner Software ကို GNU / Linux မှာဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။ | Linux မှ
အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်, ငါတို့အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့ကြသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း သူတို့စာဖတ်သူတွေကိုကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်ရပြီ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခေါင်းစဉ်များဖုံးလွှမ်းထားသည် ဒီဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux OS ကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ။, အခြားအချိန်များတွင်အချို့သောအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းအတွက်သင့်လျော်သော GNU / Linux OS သို့မဟုတ်ရိုးရိုး၏areaရိယာနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေခံသဘောတရားများအကြောင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း၊ Cryptocurrencies၊ Blockchain သို့မဟုတ် FinTech.
ဒီအခွင့်အလမ်းမှာငါတို့ပြောမယ် MinerGate ဆော့ဝဲ ငါတို့ဘယ်လိုပေါ်မှာတပ်ဆင်ရန် OS GNU / Linux။ ငါတို့ရွေးလိုက်ပြီ MinerGate, ကတည်းက က MS Windows Operating Systems, များသောအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်သည်၎င်း၏ထိရောက်မှုနှင့်ရိုးရှင်းနှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်း၏ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။
အကြောင်းအရာကိုအပြည့်အဝမလေ့လာခင်၊ ဆက်စပ်နေတဲ့ဒီပြissuesနာတွေကိုပိုမိုနားလည်ဖို့သတိရဖို့ကောင်းတယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း၊ Cryptocurrencies, Blockchain သို့မဟုတ် FinTech, အချို့ယခင်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရှိပါတယ် ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်အတွင်းတွင်ဖတ်ရန်၊ ပြန်လည်ဖတ်ရန်အဆင်ပြေရန်၊ အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
1 MinerGate ဆိုတာဘာလဲ။
2 MinerGate တပ်ဆင်ခြင်း
2.1 ခြေလှမ်း 1
2.2 ခြေလှမ်း 2
2.3 ခြေလှမ်း 3
MinerGate အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒါပါ သတ္တုတွင်း softwareသို့သော်၎င်းသည်နာမတော်ဖြစ်သည် အွန်လိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းပလက်ဖောင်း လျှောက်လွှာကထောက်ပံ့ပေး။
သူတို့ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အဆိုအရ ပလက်ဖောင်းနှင့် software အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်:
"MinerGate Blockchain ဝါသနာရှင်များအုပ်စုတစ်စုက ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောငွေကြေးပေါင်းစုံတူးဖော်ရေးရန်ပုံငွေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွယ်ကူဆုံးသတ္တုတူးဖော်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ၊ ယုံကြည်အားထားရလောက်သော ၂၄/၇ ပံ့ပိုးမှု ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သင့်အတွက်သင့်တော်သောအထောက်အပံ့အသိုင်းအဝိုင်းကိုပေးသည်".
"MinerGate xFast GUI Miner အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောသတ္တုတွင်း software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုဒ်ဆိုင်ရာဗိသုကာအသစ်အပေါ် အခြေခံ၍၊ လျှောက်လွှာသည်သင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက်အထင်ကြီးလောက်သော hash output ကိုပြသသည်။".
မှတ်ချက်ဖြေ - ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ installation ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးအပိုဆောင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ် Distro MX Linux 19.X ခေါ်ဆိုခ အံ့ဖွယ် ၂.၀ယခင်ကဤသင်ခန်းစာများအရဖော်ပြထားသောအလုပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော၊ ထို့အပြင်လက်ရှိ version ကိုသတိပြုပါ MX Linux ၀.X အဲဒါကိုအခြေခံသည် Debian GNU / Linux 10 (Buster).
Mining Software ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ဒီဟာကိုငါတို့သွားရမယ် Downloads အပိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လက်ရှိနှင့်လက်ရှိရရှိနိုင် version ကို download လုပ်ပါ GNU / Linux များ။ ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားသည့်အချိန်တွင်သူတို့သည်သွားရန်ပြင်ဆင်နေကြသည် တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း 1.7, အပေါ်တပ်ဆင်မှုအတွက်အကြံပြုထားတဲ့ Ubuntu ကို။ ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်ဂရပ်ဖစ် interface (သို့) မပါဘဲလာသည်၊ Desktop (GUI) နှင့်အခြားအဘို့ Terminal (CLI).
ဗားရှင်းတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်တူညီသောမူကွဲ (များ) ကို သုံး၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည် ဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် console ကိုအထုပ်မန်နေဂျာ သင်၏ရွေးချယ်မှုနှင့်သင့်ရွေးချယ်မှု၏ဓလေ့ထုံးတမ်း mode ကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာအတွက်, ငါတို့ command ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် «dpkg»။ GUI အထုပ်အတွက်အောက်ပါအတိုင်း
ကတည်းကကျနော်တို့ပြီးသားကိုအသုံးပြုနေကြသည် GNU / Linux Distro အံ့ဖွယ် ၂.၀, အမိန့် «dpkg» သာ၏မရှိခြင်းကဖော်ပြသည် မှီခိုသို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက် အောက်ပါ: «libqt5websockets5». ဒီ Distro ကိုအသုံးပြုလျှင်၎င်းအမှားတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်က install လုပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုတဲ့ကိစ္စမှာ Ubuntu၊ Debian၊ MX Linux သို့မဟုတ်အခြားအလားတူ (သို့) အခြားအရာများမဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ OS ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်သတိရပါ ယခင်ဆောင်းပါးကျနော်တို့အဆက်မပြတ် updated စောင့်ရှောက်သော။
အခြားမည်သည့်မျှော်လင့်ထားသည့်အမှားများအတွက် မှီခိုသို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက်, ဒီအမိန့်2အမိန့်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ညီမျှရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် GNU / Linux Distro အသုံးပြုခံ့:
တပ်ဆင်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပြီးပါက၊ ကျန်ရှိနေသေးသောအရာသည်“ application” ကိုစတင်ရန်ဖြစ်သည် MinerGate ထဲမှာ Applications menu, ရုံးခွဲ။ အကယ်၍ ပြproblemsနာမရှိဘူးဆိုရင်၊ တချို့၊ မသိတဲ့ (သို့) ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိရင်၊ သင့်ရဲ့ ၀ င်ခွင့်အတွက်အဲဒါဟာအပြည့်အ ၀ ပွင့်နေလိမ့်မယ် အီလက်ထရောနစ်စာပို့ ပရိုဂရမ်၏ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်ပေါ် ၀ င်ပါ။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ပုံတင်ရန်ရမည်သတိရပါ MinerGate ပလက်ဖောင်း ထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်စေရန်အလို့ငှာ Software များ.
အကြိမ်ပေါင်းများစွာဒီ ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း software packages များနှင့်စာကြည့်တိုက်များလိုအပ်သည် ဗီဒီယို (NVidia, AMD နှင့် Intel) အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရန်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် MinerGateသင်၏ terminal ဗားရှင်း «MinerGate-xFast-cli-1.7-ubuntu.deb»ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည် «nvidia-cuda-dev», အပေါ်မူတည်။ လိုအပ်သည် GNU / Linux Distro ပတ်ပတ်လည်အလေးချိန်နိုင်သော packages များ၏စီးရီးကို download လုပ်ပါရန်အသုံးပြုခဲ့သည် 600 ကို MB ။
များစွာသောအမှုများတွင်၊ သူတို့စနစ်တကျ configure မပါလျှင်သူကစနစ်မတည်မငြိမ်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၌မရှိပါ သင့်လျော်သောဟာ့ဒ်ဝဲပိုဆိုးတာကသင်ဖျက်ပစ်ရန်သင်တောင်းဆိုနိုင်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော packages များ ပြီးတော့မင်းကိုထားခဲ့ပါ GNU / Linux Distro ပူပသို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်။ ဒါကြောင့်သတိထားပါ၊
နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်မည် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း software နည်းနည်းချင်းစီစမ်းသပ်ခြင်းကိုသွားရန်
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း software ကိုခေါ် «MinerGate»၎င်းသည်၎င်း၏ရိုးရှင်းမှု၊ ထိရောက်မှုနှင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့ပေးသော Crypto Platform ၏အသိအမှတ်ပြုခံရမှုတို့တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » MinerGate - ဒီ Miner Software ကို GNU / Linux မှာဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။